HyperX dia namoaka ny CES 2022 miaraka amin'ny headphone sy periferika | Vaovao momba ny gadget
Ny tsipika farany amin'ny vokatra HyperX dia manolotra ambaratonga fampiononana, fampisehoana ary fanaraha-maso vaovao, ary natao hanatsarana ny traikefa amin'ny lalao ho an'ny mpilalao amin'ny ambaratonga rehetra. CES 2022 dia toerana tonga lafatra ho an'ny HyperX hanehoana amintsika ireo vaovao rehetra ireo.
HyperX Cloud Alpha Wireless Headphones: Cloud Alpha Wireless dia manolotra ny fiainana bateria lava indrindra amin'ny headset gaming tsy misy tariby2 miaraka amin'ny 300 ora 1 ny faharetan'ny bateria amin'ny fiampangana tokana. Ny écouteur dia manome traikefa amin'ny feo mirefy miaraka amin'ny DTS, ary mampiasa teknolojia efi-trano roa vaovao sy nohatsaraina ary mpamily HyperX 50mm, izay manasongadina endrika manify sy maivana kokoa sady mitazona ny feo sy ny fampisehoana ny dikan-teny tany am-boalohany miaraka amin'ny tariby.
HyperX Clutch Wireless Controller: Mba hanamafisana ny fanaraha-maso ny lalao finday, ny HyperX Clutch Wireless Controller dia manolotra endrika fanaraha-maso mahazatra sy fehezam-boninkazo mahazo aina mba hanatsarana ny fahombiazan'ny lalao. Ny Clutch Wireless Controller dia misy clip finday azo esorina sy azo amboarina izay mivelatra manomboka amin'ny 41mm ka hatramin'ny 86mm ary tonga miaraka amin'ny bateria azo averina ao anatiny izay manome fiainana bateria hatramin'ny 19 ora amin'ny fiampangana tokana.
HyperX Pulsefire Haste Wireless Mouse: Ny Pulsefire Haste Wireless Mouse dia mampiasa endrika akorandriaka hexagonal tena maivana amin'ny honeycomb izay manolotra hetsika haingana kokoa sy rivotra lehibe kokoa. Ny totozy dia manolotra teknolojia filalaovana tsy misy tariby miaraka amin'ny fifandraisana an-tariby tsy misy latency ambany izay miasa amin'ny fatran'ny 2,4 GHz azo itokisana ary manana fiainana bateria maharitra hatramin'ny 100 ora amin'ny fiampangana tokana.
Ho fanampin'izay, namoaka karazana écouteur, klavier ary totozy vaovao efa hita ao amin'ny tranokalany i HyperX.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » HyperX dia namoaka ny CES 2022 miaraka amin'ny écouteur sy periferika